Self-Study မှာ ကျရှုံးနေပြီလား – Live the Dream
Self-Study မှာ ကျရှုံးနေပြီလား
Self-Study ဘာကြောင့်လုပ်ရမှာလဲ? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုလို နည်းပညာခေတ်မှာတော့ လူနေမှုစနစ်တွေ၊ နည်းပညာတွေ တိုးတက်မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ လေ့လာမှုတွေကလည်း တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီးရှိနေသလို အများနဲ့တန်းတူရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ပညာရပ်များစွာ၊ Skills များစွာကို တတ်မြောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် များများလေ့လာရင် များများသိနိုင်မယ်၊ များစွာသောအခွင့်အရေးတွေရနိုင်မယ်ဆိုတာကို လက်ခံကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေ၊ သင်တန်းတွေ၊ အလုပ်ခွင်တွေမှာ သင်ယူကြပေမယ့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ သိရှိနိုင်လို့ ကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်းကို မဖြစ်မနေ လုပ်ကြရပါတယ်။ ကိုယ်အတွက်အကျိုးဖြစ်စေမယ့် ဘာသာစကား၊ သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ၊ စာပေနဲ့ အနုပညာ၊ အားကစား၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး စသည်ဖြင့် Soft Skills, Hard Skills တွေ ထပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်သင်ယူကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် Self-Study လုပ်ရင် အလုပ်မဖြစ်တာလည်း မအောင်မြင်ဖြစ်ရတာလဲ? Self-Study ကို ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ ဆိုတာကတော့ ခုထိဝေဝါးနေကြတုန်းပါပဲ။ ဒီအတွက် ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်…
၁။ ဘာကို လေ့လာသင့်လဲ?
အရေးကြီးဆုံးနဲ့ ပထမဦးဆုံး စဉ်းစားရမယ့်အရာက ဘာကို လေ့လာသင့်လဲ? ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာလည်း အများကြီးရှိသလို လေ့လာစရာတွေ ကအများကြီးရှိတယ်။ Online မှာလည်း Resources အများကြီးရနိုင်တယ် မှန်ပေမယ့် တကယ်လေ့လာသင့်တဲ့အရာက ကိုယ့်ရဲ့ သက်မွေးကြောင်းလမ်းကြောင်းကို အထောက်အကူဖြစ်မယ့်အရာ၊ ကိုယ်တကယ်လက်လှမ်းမှီလေ့လာနိုင်မယ့်အရာ၊ လေ့လာဖို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့အရာ ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးလှပါတယ်။ တစ်ယောက်ထဲလေ့လာရမှာမို့ စိတ်အားထက်သန်ဖို့လိုအပ်သလို ကိုယ့်နဲ့မကိုက်တဲ့ Level ကိုလေ့လာမိရင်လည်း Self-study မှာ အောင်မြင်မှာမဟုတ်သလို ကိုယ်အခုလက်ရှိအလုပ်အကိုင်အတွက်လည်းအသုံးမဝင် အနာဂတ်သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လည်း အထောက်အကူမပေးနိုင်ရင်တော့ ဒီလိုအရာတွေလေ့လာနေတယ်ဆိုရင် ရပ်တန့်လိုက်ပါနော်…
လောဘနဲ့လူတွေဆိုတော့လည်း ပညာရပ်တွေကို လည်း လောဘတစ်ကြီးနဲ့ လေ့လာချင်တာပေါ့။ အများကြီးလေ့လာရင် အများကြီး တတ်မယ်လို့ အလွယ်ထင်နိုင်ပေမယ့် လေ့လာမှုတွေများပြီး အာရုံများရင်လည်း ဘယ်အရာကိုမှ ထူးထူးခြားခြားထဲထဲဝင်ဝင် တတ်မြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး တစ်ခုထဲကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ အာရုံစိုက်လေ့လာတာက ပိုမိုထိရောက်သလို တတ်မြောက်နှုန်းလည်း ပိုမိုမြန်ဆန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ သင်ယူမှုအားကောင်းနေရင်တော့ နှစ်ခုသုံးခု သင်ကြားနိုင်ပေမယ့် အာရုံများပြီးခုချိန်ထိ ဘာမျှဖြစ်မလာသေးရင်တော့ တစ်ခုထဲကို အာရုံစိုက်လေ့လာသွားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်…
၃။ Resources အရင်းအမြစ် ရှိပြီလား
ဘယ်လိုပညာရပ်မဆို ကိုယ့်မှာ ရှိသင့်တဲ့ Resource ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာမရှိပဲ ရုံးသုံးစာစီစာရိုက်လေ့လာတာမျိုး၊ ကင်မရာမရှိပဲ ဓါတ်ပုံပညာသင်ယူတာမျိုးဆိုရင် လေ့လာပြီးပြီးရော လေ့ကျင့်မှုမရှိဆိုရင်တော့ Self-Study မှာ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လေ့လာတဲ့ ပညာရပ်၊ ဘာသာရပ်အလိုက် လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ resource က အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်အချိန်ပေးသင်ယူမှု မရှိရင်လည်း Self-study မှာကျရှုံးရတာပဲ။ ဒါကြောင့် ပညာရပ်ကို ရွေးချယ်သင်ယူကြတဲ့အခါ ကိုယ့်မှာ Resource ရှိပြီလားဆိုတာကလည်း ထည့်စဉ်းစာရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။
Self-study မှာ အရေးအကြီးဆုံးက အာရုံမလွင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆူညံပြီး ကိုယ့်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့နေရာဆိုရင်တော့ သင်ယူလေ့လာခြင်းမှာ အာရုံစိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အဆောင်ဖြစ်ဖြစ် ဆူညံနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့ ထွက်သွားသင့်ရင်ထွက်သွားလိုက်ပါ။ ထွက်သွားဖို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း Self-study လုပ်မယ့်အချိန်မှာ တိတ်ဆိတ်မယ့် နေရာ စာကြည့်တိုက်ဖြစ်၊ ကော်ဖီဆိုင်လေးဖြစ်ဖြစ် အာရုံမပျက်စေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေ့လာပါ။ အာရုံလွင့်ရင်လည်း self-study မှာအောင်မြင်ဖို့ ခက်ခဲလှပါတယ်.
၅။ Plan ချတတ်ပါစေ
လူတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်နဲ့ကိုယ်လည်ပတ်နေရတော့ Plan ကောင်းကောင်းချနိုင်ဖို့က ကိုယ့်မှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်။ မင်မင်အနေနဲ့ ပြောချင်တာက ကိုယ်ချမှတ်ထားတဲ့ Plan တွေရဲ့ အချိန်တွေက ကိုယ့်အတွက်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ သင်ယူမယ့် Course အလိုက် နာရီအရေအတွက် မတူနိုင်ပေမယ့် ပျှမ်းမျှအားဖြင့် Course တစ်ခုက နာရီ (၆၀) ခန့်ကြာမြင့်တာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ တစ်လတန်သည်၊ နှစ်လတန်သည်ချမှတ်ပြီး ပုံမှန်လေ့လာသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသတိထားရမှာကတော့ ကိုယ့်အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ပြီး Work-Life balance မဖြစ်တဲ့ Plan မျိုးဆိုရင်တော့ motivation တွေ ပျောက်ဆုံးနိုင်ပြီး Self-Study မှာကျရှုံးဖို့ရာခိုင်နှုန်းများနေပါပြီ။ ဒီတော့ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Plan ဘယ်လိုချသင့်လဲ နားလည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်နော်…
၆။ အခွင့်အရေး ရသလောက်
Self-Study လုပ်တာက တစ်ယောက်ထဲလေ့လာရမယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်လေ့လာတဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့ ရင်နှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ senior တွေနဲ့ အလျှင်းသင့်သလို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာ၊ သူတို့ဆီက အကြံဉာဏ်ယူတာမျိုးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့လေ့လာမှုကို အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကို သူငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆရာ၊ဆရာမတွေဆီကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ခွင်က senior တွေ ဆီကပဲဖြစ်ဖြစ် မေးမြန်းဆွေးနွေးပြီး ဝေမျှသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ Seminars များ၊ Events များမှာ ဟောပြောဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်း တက်ရောက်ပြီး ပညာ ဗဟုသုတတွေကို အခွင့်အရေးရသလောက် ရှာဖွေသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
၇။ တာဝန်ယူမှု ရှိပါစေ
တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုဆိုတာ မရှိရင် ဘာပဲလေ့လာလေ့လာ အောင်မြင်မှုမရတာကိုတော့ လူတိုင်းလက်ခံနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကို ဒီနေ့မှာ တတ်မြောက်ရမယ်၊ ဒီလို အခွင့်အရေးတွေကြောင့် တတ်အောင်သင်မယ်၊ လူလည်ခေါင်မှာ ဆွံ့အမနေဖို့ သင်မယ် စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားတွေပေး ဂတိပေးပြီး ဒီလို ဂတိတွေကို တည်နိုင်ဖို့ တာဝန်ယူနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပေးထားတဲ့ဂတိကို ရှောင်လွဲလို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့ အစားမထိုးပါနဲ့။ အနှောင့်အယှက်တွေလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုစိတ်ကို လေးစားသောအားဖြင့် ငြင်းသင့်ရင် ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းလိုက်ပါနော်… ဒါလို စိတ်ထားတွေက self-study အောင်မြင်ဖို့ တွန်းအားဖြစ်နေမှာအသေအချာပါပဲ..
၈။ ကောင်းကျိုးကို နားလည်ပါ
Self-Study ကဘယ်လောက် သက်ရောက်မှုရှိလဲ မေးလာရင်တော့ ဒီလိုရှိပါတယ်….စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခု ကို self-study နဲ့ ထပ်ပြီးပေါင်းစပ်လိုက်ရင် သိထားတဲ့အရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မိမယ်။ ပိုပြီး နက်နက်နဲနဲသိရှိလာမယ်။ ကျောင်း၊ သင်တန်း တို့လို သင်ခန်းစာအကန့်အသတ်နဲ့ သင်ကြားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာနိုင်မယ်။ Up-to-date အကြောင်းအရာတွေကို သိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Self-Study လုပ်ခြင်းကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေ တိုးတက်လာမယ်။ ပညာရပ်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါ သူများအားကိုးမနေတော့ဘူး။ အမှီအခိုကင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လို ခံယူလာနိုင်မယ်။ နောက်ထပ်လေ့လာဖို့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိန်ခေါ်ရဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မင်မင်ကိုယ်တွေ့အရာတွေပါ။ Self-study နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကောင်းကျိုးခံစားဖူးတယ်ဆိုရင်လည်း Comment မှာ ဝေမျှပေးပါဦးနော်….